Times Of Nepali » मेरो बढुवा रोक्नको लागि मलाई यसरी फसाईयो ; निलम्बित एसपी बिस्ट
२ आश्विन २०७५ |
मेरो बढुवा रोक्नको लागि मलाई यसरी फसाईयो ; निलम्बित एसपी बिस्ट
१ असोज, काठमाडौं । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया वालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त भनिएका दिलिपसिंह विष्ट साधारण तारेखमा छुटेपछि घटना रहस्यमय मोडमा पुगेको छ ।
उनै निलम्बित विष्टसंग सोमबार भएको कुराकानीका क्रममा उनले जंगबहादुरका पालाको भन्डारखाल पर्वपछि आफ्नो जागिरे जीवनमा कोतपर्व आएको भन्दै दुखेसो पोखे । उनले आफ्नो जीवनमा आएको कोत पर्वलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्न पनि आग्रह गरे ।
प्रस्तुत छ, एसपी विष्टसँग भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
तपाई अहिले काठमाडौंमै हुनुहुन्छ, आफूमाथिको निलम्बनबारे गृहमन्त्रीसँग कुरा राख्नु भएन ?
एक पटक बोलाउनुभएको वेला हामीले ब्रिफिङ गर्‍यौं । सोध्ने कुरा भयो । हामीले जवाफ दियौं । त्यति हो ।
तपार्इ नेपाल प्रहरी संगठनमा कहिलेदेखि लाग्नुभयो ? अहिले तपाईको उमेर कति भयो ?
म ५२ सालदेखि सेवामा प्रवेश गरेको हुँ । उमेर ४८/४९ पुग्यो ।
निर्मला पन्त अन्तिमपटक बम दिदीबहिनीको घर गएकी थिइन् । बम परिवारसँग तपाईंको चिनजान, सम्पर्क वा सम्बन्ध के थियो ?
अाइजीपीले भनेजस्तो तपाईं नालायक हो कि होइन त ?
नालायक भए जिल्ला प्रमुख किन दिनुहुन्थ्यो होला र ? त्योभन्दा अगाडि पनि जिल्ला प्रमुख चलाएकै हुँ । अहिले पनि असार मसान्तसम्म कुनै पनि विवाद थिएन । अहिले पनि मेरो कार्यकालमा यो बाहेक ६ महिनाको अवधिमा अन्य कुनै केश ‘अनसल्भड’ थिएन । भनेपछि, असार मसान्तसम्म मै राम्रो छु नि ।
डीएनए के हो त ? त्यो सबैभन्दा ठूलो प्रमाण होइन ? भोलि खोज्दै जाँदा शंका लाग्ने व्यक्तिलाई टेस्ट गर्दा खुल्छ ।
तपाईंले मेरा विरुद्ध भिड लाग्यो भन्नुभयो, भीड तपाईविरुद्ध लाग्नुपर्ने कारण के होला ?
तपाईंहरुकोमा पनि मेल वा अन्य माध्यमबाट सूचना आयो होला । कसरी प्रोपोगान्डा भयो भन्ने तपाईंहरुलाई पनि थाहा छ । अब व्यक्ति तोक्न नभन्नुस् ।
रिसइबी भन्दा पनि हामीले प्रेस काउन्सिलमा कारबाहीका लागि लिखित उजुरी गरेका छौं । पत्रकार महासंघमा पनि उजुरी गरेका छौं । स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
तपाईं राजनीतिक पहुँच लगाएर घुमिफिरी सुदुरपश्चिममै पोष्टिङ पाउन सफल हुने गर्नुभएको छ, किन ?
पहुँच भएको भए अर्को राम्रो ठाउँमा पनि पुगिहाल्थें । राम्रै ठाउँमा गइहाल्थें । काहीँ, कसैले नजाने ठाउँ भनेको सुदुरपश्चिम हो । पेलानमा परिएको हुन्छ । त्यही हुनाले काहीँ नगएको ठाउँमा, पहुँच नपुगेको ठाउँमा बसेको हुँ ।
प्रहरी संगठनभित्र एकदमै विवादित अफिसर पनि भनिँदोरहेछ नि तपाईंलाई ?
अहिले जिल्लामा गएको टोलीले तपाइसँग केही छलफल गर्छ कि गर्दैन ?
अहिलेको टोलीले सम्पर्क गरेको छैन । आवश्यक पर्‍यो भने अझै पनि सल्लाह, सुझाव दिन्छु । आवश्यक पर्‍यो भने उहाँहरुले पनि कल गर्नु हुन्छ ।
:प्रस्तुत समाचार onlinekhabar बाट साभार गरिएको हो
प्रकाशित मिति २ आश्विन २०७५, मंगलवार १४:३२